ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် လေယာဉ်စီးလို့ရလား? - For her Myanmar
ကိုယ်ဝန်ယူမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတဲ့သူတိုင်း သိထားသင့်တယ်နော်!!!!
ညီမလေးတို့ကို သတိရလို့ ညီမလေးတို့ စိတ်ဝင်စားလောက်မယ့် ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ အတူ ပြန်လာပါပြီနော်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ညီမလေးတို့ အတွက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လေးတွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ညီမလေးတွေအတွက် အဓိကပေါ့လေ.. ဒါဆို ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်… .
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက်ရော ကလေးအတွက်ရော သတိထားရမှာတွေ အများကြီးပါ။ အနေအထိုင်အစားအသောက်ကစလို့ နောက်ဆုံး ခရီးသွားတာအဆုံး ကလေးကိုများထိခိုက်နိုင်မလားဆိုပြီး ပူပင်ကြရတာ ညီမလေးတို့လည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ “ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန် လေယာဉ်စီးလို့မရဘူး.. အမြင့်ကြီးကို ရောက်မှာဆိုတော့ လေဖိအားနဲ့ဘာနဲ့ ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်တယ်၊ ကလေးစောမွေးနိုင်တယ်” ဆိုတာမျိုးကလည်း လူပြောများကြတယ်မလား…
Related Article >>> အသက် (၃၅)နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ဘာတွေ သတိထားသင့်လဲ?
ဒါဆို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့အချိန် အိမ်မှာပဲ နေရတော့မှာလား? အထူးသဖြင့် လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားလို့ အဆင်မပြေဘူးလား? ဆိုပြီးတွေးနေပြီလား.. မပူပါနဲ့။ ဒီမေးခွန်းလေးအတွက် တစ်ကြောင်းထဲရိုးရိုးဖြေရမယ်ဆိုရင် “ကိုယ်ဝန်ဟာ ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုရင် စိတ်ချလက်ချလေယာဉ်စီးလို့ရပါတယ် ” လို့ ဖြေရမှာပါပဲ။ ဆိုလိုတာက လေယာဉ်စီးလို့ ကလေးစောမွေးတာ ၊ ရေမွှာရေ စောပေါက်တာမျိုး မရှိပါဘူးနော်
ဒါကိုမှ ပြန်ရှင်းရရင် ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် တစ်လျှောက်လုံး ဗိုက်နာတာ ရေဆင်းတာ၊ သွေးဆင်းတာမျိုး ၊ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်တာမျိုးမရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို ဆိုလိုတာပါ။
ဘယ်နှစ်လအထိ စိတ်ချလက်ချ စီးလို့ရလဲဆိုရင်…
ကိုယ်ဝန် ၂၈ပတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်ပါမှ လေယဉ်စီးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချရဖို့ဆိုရင် မစီးခင် ဆရာဝန်နဲ့ စိတ်ချရအောင် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ ၃၇ပတ်မတိုင်ခင်အထိ စိတ်ချလက်ချစီးလို့ရတယ်ဆိုရမှာပါ။ အမွှာကိုယ်ဝန်ဆိုရင်တော့ ၃၂ပတ်ဖြစ်မှာပါ။ ဒီထက်ကျော်ရင်တော့ အချိန်မရွေး ကလေးမွေးသွားနိုင်ခြေရှိလို့ လေယာဉ်ပေါ် မမွေးချင်ရင်တော့ မစီးသင့်တော့ပါဘူး။
အဲ့လိုသတ်မှတ်ချက်မရှိပေမဲ့ တချို့ကလည်း လနုချိန် ပထမ သုံးလပတ်မှာ မူးဝေပျို့အန်မှာစိုးလို့ လေယာဉ်စီးလေ့ မရှိကြပါဘူး။ မူးဝေတာ ဗိုက်ကြီးနာစွဲတာ မရှိရင်တော့ စီးလို့ရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် လေယာဉ်စီးရင် ဘာတွေဂရုစိုက်ရမလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လေယာဉ် “၄”နာရီထက်ကျော်အောင် စီးမယ်ဆိုရင်တော့ ခြေသလုံးသွေးကြောပိတ်တဲ့ Deep Vein Thrombosis ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒါကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ခရီးသွားချိန် ခြေသလုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာ တတ်နိုင်သလောက် လမ်းလျှောက်တာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ယောင်းတို့လည်း ခရီးသွားဖို့ ပြင်ဆင်ပြီး ဇဝေဇဝါဖြစ်နေရင် စိတ်မပူပါနဲ့လို့။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဝတ်စားပြီး မူးတတ်ရင် သောက်ဖို့ ဆေးလေးတွေ ဆောင်သွားဖို့တော့ မမေ့နဲ့နော်။
ကိုယျဝနျယူမယျလို့ စိတျကူးထားတဲ့သူတိုငျး သိထားသငျ့တယျနျော!!!!
ညီမလေးတို့ကို သတိရလို့ ညီမလေးတို့ စိတျဝငျစားလောကျမယျ့ ခေါငျးစဉျလေးနဲ့ အတူ ပွနျလာပါပွီနျော။ ဒီတဈခါတော့ ကိုယျဝနျဆောငျ ညီမလေးတို့ အတှကျနဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျလေးတှနေဲ့ ရငျးနှီးတဲ့ ညီမလေးတှအေတှကျ အဓိကပေါ့လေ.. ဒါဆို ကွညျ့ကွညျ့ကွရအောငျ… .
ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့အတှကျရော ကလေးအတှကျရော သတိထားရမှာတှေ အမြားကွီးပါ။ အနအေထိုငျအစားအသောကျကစလို့ နောကျဆုံး ခရီးသှားတာအဆုံး ကလေးကိုမြားထိခိုကျနိုငျမလားဆိုပွီး ပူပငျကွရတာ ညီမလေးတို့လညျး သိပွီးဖွဈမှာပါ။ “ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခြိနျ လယောဉျစီးလို့မရဘူး.. အမွငျ့ကွီးကို ရောကျမှာဆိုတော့ လဖေိအားနဲ့ဘာနဲ့ ကလေးကို ထိခိုကျနိုငျတယျ၊ ကလေးစောမှေးနိုငျတယျ” ဆိုတာမြိုးကလညျး လူပွောမြားကွတယျမလား…
Related Article >>> အသကျ (၃၅)နှဈဝနျးကငျြမှာ ကိုယျဝနျဆောငျရငျ ဘာတှေ သတိထားသငျ့လဲ?
ဒါဆို ကိုယျဝနျဆောငျနတေဲ့အခြိနျ အိမျမှာပဲ နရေတော့မှာလား? အထူးသဖွငျ့ လယောဉျနဲ့ ခရီးသှားလို့ အဆငျမပွဘေူးလား? ဆိုပွီးတှေးနပွေီလား.. မပူပါနဲ့။ ဒီမေးခှနျးလေးအတှကျ တဈကွောငျးထဲရိုးရိုးဖွရေမယျဆိုရငျ “ကိုယျဝနျဟာ ပုံမှနျအတိုငျးပဲဆိုရငျ စိတျခလြကျခလြယောဉျစီးလို့ရပါတယျ ” လို့ ဖွရေမှာပါပဲ။ ဆိုလိုတာက လယောဉျစီးလို့ ကလေးစောမှေးတာ ၊ ရမှောရေ စောပေါကျတာမြိုး မရှိပါဘူးနျော
ဒါကိုမှ ပွနျရှငျးရရငျ ပုံမှနျကိုယျဝနျဆိုတာ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ တဈလြှောကျလုံး ဗိုကျနာတာ ရဆေငျးတာ၊ သှေးဆငျးတာမြိုး ၊ ကိုယျဝနျဆိပျတကျတာမြိုးမရှိတဲ့ ကိုယျဝနျကို ဆိုလိုတာပါ။
ဘယျနှဈလအထိ စိတျခလြကျခြ စီးလို့ရလဲဆိုရငျ…
ကိုယျဝနျ ၂၈ပတျနောကျပိုငျးမှာတော့ ဆရာဝနျခှငျ့ပွုခကျြပါမှ လယေဉျစီးခှငျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ စိတျခရြဖို့ဆိုရငျ မစီးခငျ ဆရာဝနျနဲ့ စိတျခရြအောငျ တိုငျပငျသငျ့ပါတယျ။
တကယျတမျးတော့ ၃၇ပတျမတိုငျခငျအထိ စိတျခလြကျခစြီးလို့ရတယျဆိုရမှာပါ။ အမှာကိုယျဝနျဆိုရငျတော့ ၃၂ပတျဖွဈမှာပါ။ ဒီထကျကြျောရငျတော့ အခြိနျမရှေး ကလေးမှေးသှားနိုငျခွရှေိလို့ လယောဉျပျေါ မမှေးခငျြရငျတော့ မစီးသငျ့တော့ပါဘူး။
အဲ့လိုသတျမှတျခကျြမရှိပမေဲ့ တခြို့ကလညျး လနုခြိနျ ပထမ သုံးလပတျမှာ မူးဝပြေို့အနျမှာစိုးလို့ လယောဉျစီးလေ့ မရှိကွပါဘူး။ မူးဝတော ဗိုကျကွီးနာစှဲတာ မရှိရငျတော့ စီးလို့ရပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ လယောဉျစီးရငျ ဘာတှဂေရုစိုကျရမလဲ?
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ လယောဉျ “၄”နာရီထကျကြျောအောငျ စီးမယျဆိုရငျတော့ ခွသေလုံးသှေးကွောပိတျတဲ့ Deep Vein Thrombosis ဖွဈနိုငျခွရှေိပါတယျ။ ဒါကို ကာကှယျဖို့ဆိုရငျ ခရီးသှားခြိနျ ခွသေလုံးလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာ၊ လယောဉျပျေါမှာ တတျနိုငျသလောကျ လမျးလြှောကျတာတှေ လုပျနိုငျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျယောငျးတို့လညျး ခရီးသှားဖို့ ပွငျဆငျပွီး ဇဝဇေဝါဖွဈနရေငျ စိတျမပူပါနဲ့လို့။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဝတျစားပွီး မူးတတျရငျ သောကျဖို့ ဆေးလေးတှေ ဆောငျသှားဖို့တော့ မမနေဲ့နျော။
Tags: airplane, Beware, care, Health, Ok, Pregnant, Safe, Time
မယ်တင် (ဆေး-၁) January 8, 2019